စျေးပေါသော silicone Fiberglass အထည်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Chengyang
Silicon Coated Fiberglass အထည်
Polyurethane Coated Fiberglass အထည်
လူမီနီယံသတ္တုပါး Fiberglass အထည်
Acrylic Coated Fiberglass အထည်
silicone Fiberglass အထည်
ဆီလီကွန် Fiberglass အထည်ကိုအပူချိန်မြင့်ခံနိုင်သည့်ဖန်ထည်စည်များနှင့်ဆီလီကွန်ရာဘာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ခြင်း။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအာကာသယာဉ်ပျံ၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ အကြီးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ကိရိယာများ၊ စက်ယန္တရားများ၊
FOB စျေးနှုန်း: အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၂-၄.၂ / စတုရန်းမီတာ
Min.Order အရေအတွက် - 500sqm
Supply နိုင်ခြင်း: 100,000 စတုရန်းမီတာ / လ
Port တင်နေသည် Xingang, တရုတ်
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ: မျက်မှောက်မှာ L / C, T / T က
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: ၎င်းသည်ဖလင်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ပုံးထဲထည့်သည်
၁ ။ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
silicone Fiberglass အထည် နောက်ခံပြုပြင်ခြင်းဖြင့်အပူချိန်မြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောဖန်ထည်နှင့် silicone ရာဘာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအခြေခံပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအာကာသယာဉ်ပျံ၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ အကြီးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ကိရိယာများ၊ စက်ယန္တရားများ၊
2. နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters
0.5 ± 0.01mm
0.8 ± 0.01mm
1.0 ± 0.01mm
500 ဂရမ်± 10 ဂရမ်
1m, 1.2m, 1.5m
၁) ခံနိုင်ရည်မြင့်သောအပူချိန်နှင့်အပူချိန်နိမ့်သောကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ -70 ° C-280 ° C;
၂။ ဓာတုခြေးဆေး၊ မီးခံ၊ ရေနံ၊ ရေစိုခံ၊
၄) အိုဇုန်းလွှာ၊ အောက်ဆိုဒ်၊ အလင်းနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၅) ကောင်းမွန်သော non-stick မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူရေချိုးနိုင်သည်။
၂) သတ္တုမဟုတ်သောလျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ၎င်းကို tubing အတွက် connector အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးရေနံ၊ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ၊ ဘိလပ်မြေနှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ fields များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
၃) ၎င်းကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းများ၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများနှင့်စသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: ပလတ်စတစ်အိတ် + ပုံး
ရှေ့သို့ အနက်ရောင် Fiberglass အထည်
1. Q: နမူနာစွဲချက်ကော?
A: မကြာသေးမီကနမူနာ - အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကုန်တင်ရမည်။ စိတ်ကြိုက်နမူနာ - နမူနာကောက်ခံရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်တရားဝင်အမှာစာများနောက်မှသတ်မှတ်လျှင်ပြန်အမ်းပါမည်။
2. Q: နမူနာအချိန်ကော?
A: လက်ရှိနမူနာတွေအတွက် ၁-၂ ရက်လောက်ကြာတယ်။ စိတ်ကြိုက်နမူနာအဘို့, က 3-5 ရက်ကြာပါသည်။
၃။ မေး။ ထုတ်လုပ်မှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
ဖြေ MOQ အတွက် ၃ ရက်မှ ၁၀ ရက်လောက်ကြာပါတယ်။
၄။ မေး။ ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
A: ၎င်းမှာယူမှုအရေအတွက်နှင့်ရေကြောင်းလမ်းအပေါ်အခြေခံသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ သင်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
silicone Coated Fiberglass အထည်
silicone impregnated Fiberglass အထည်
Acrylic Coated ဖန်မျှင်ထည်
လူမီနီယမ် Coated Fiberglass အထည်
အမှတ် ၈ Tianxiu ST Tiedong RD Beichen DT Tianjin China
တီလီဂျင်း Cheng Yang ဆီလီကွန်၏ထုတ်ကုန်များ ...
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2020: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ သိကောင်းစရာများ - Hot ထုတ်ကုန်များ - Sitemap
လူမီနီယံဖန်မျှင်ထည်အထည်, Pu Coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်, Acrylic Coated Fiberglass အထည်, Acrylic ဖန်မျှင်ထည်အထည်, ဖန်ထည် Fiberglass, Acrylic Coated ဖန်မျှင်ထည်,